सबैलाई अस्कर वाइल्डको नाम, एक अद्भुत लेखकको बारेमा थाहा छ। तर, दुर्भाग्यवश, जनताको बढ्दो ध्यान आफैले लेखकको "केवल डोरायन ग्रेको चित्र" को एक मात्र काम गर्दछ, छायामा अनावश्यक रूपमा मालिकको अन्य कार्यहरू छोडेर। यस्तो एउटा "छाया कृति" यस लेखमा समर्पित गरिनेछ।
"केटा-स्टार" - एक नाखुलो अन्त्यको साथ परी कथा
यदि तपाईं छोटो सारांशमा हेर्नुहुन्छ भने, ओ। वाइल्डको "केटा-स्टार" एक धेरै उदासीन कथा देखिन्छ। यो सबै तथ्यले सुरु गर्छ कि काठको कुनामा जंगलबाट जान्छ। यो कडा सर्दिया हो। तिनीहरूले अब उनीहरूका हात वा खुट्टा महसुस गरेनन्। अनि अचानक तिनीहरूले आकाशबाट एक तारा पतन देख्छन् । ती ठाउँको ठाउँमा उनीहरूले सोचेका छन् र उनीहरु एक क्लोकमा लिपिबद्ध हुन्छन् (यो सुनको साथ कर्णिएको छ), बच्चाको साथ पनि एक एम्बर हार छ। लम्बरजैक मध्ये एक बच्चालाई दयापूर्वक लिनुभयो र तिनको घरमा लगे।
लगरको श्रीमतीले बच्चालाई पहिलो पटक लिन चाहँदैनन्, उनले भने कि उनीसँग पहिले नै धेरै मुटु र सानो खाना थियो, तर त्यसपछि "असल सामरी" बच्चाले घुँडामा राख्नुभयो, र स्त्रीको हृदय पिघ्यो। उनले एक बच्चा अपनाए। काठकोटार र तिनकी श्रीमानले केटालाई आफ्नै आफ्नै रूपमा उठाए, उनीहरूलाई उनीहरूको मनोवृत्तिले कहिल्यै पनि बुझ्न सकेनन्। यो एक परी कथा को कथा हो। अघिल्लो छोटो सारांश हो। "केटाकेटी-तारा" एक सजिलो कथा होइन, र तपाईं यसबाट आश्वस्त हुनुहुनेछ।
परी कथा को मुख्य नैतिक संघर्ष:
आश्चर्यजनक कुरा, असल मान्छेको उत्कृष्ट मनोवृत्तिको बावजूद केटाले रिस उठ्यो र क्रूर, किनभने उनले आफूलाई आफुको तारा पुत्र भनिन्। यसबाहेक, केटा सुन्दर, बलियो थियो। यसले उनीहरूलाई मात्र उहाँका नामका भाइबहिनीहरू, तर सबै वरपरका सन्तानहरूको नेता हुन अनुमति दिए। एकपल्ट एकपटक घरमा आए। बाहिरको, उनी भयानक थिए: तिनको अनुहार लेफिकिस बढ्यो, उनको हात अल्सरमा थिए र उनीहरु रङ्गहरुमा लुगा लगाए। क्रूर केटाले उहाँलाई हरेक सम्भावनामा झूट गर्न थाले। काठको कुकुरले बेचेको छोरोको व्यवहारको साथ क्रोध भएको थियो र उनलाई एउटा गम्भीर सुझाव दिए। तथापि, केटाले आफ्नो बुबालाई सुनेनन् र उनको सामान्य महत्वाकांक्षाले यस्तो घोषणा गरे: "तपाईं सामान्य हुनुहुन्छ, तपाईसँग मलाई बताउनको लागि अधिकार छैन। म ताराको छोरा हुँ। " बुबाले उनलाई सम्झना दिलाए कि त्यो त्यो एक साधारण लम्बमैन थियो, जसले मृत्युको मृत्युबाट धेरै समय अघि बचाए। शुरुवात, यो सुन्नु, उहाँलाई पुग्यो र स्वीकार गर्यो कि त्यो "तारा देखि केटा" को आमा थियो। काठकोटमा रमाइलो थियो र आफ्नो छोरालाई, जो सडकमा खेल्नुभयो, त्यो घर जान गए, केटाकेटी उनको आमाको प्रतीक्षा गर्दैछ। एक निर्दोष युवाहरू घरमा आए। उनको अघि मात्र एक मागेर थियो, जसमा उनले भर्खरै नै मकवानित गरेका थिए। उनले भने कि यो उनको आमा थिएन, र त्यो उनी भन्दा भन्दा एक पादना वा विपरित चुम्बन गर्थे। यसो भने, उनले घर छोडे। तर त्यो सडकमा आफूलाई देखाउन समय भन्दा अघि, आफ्नो अहिलेको साथीले एक सुन्दर जवान मानिसलाई "बेवकूफ" "एक तोडफोड" भनिन्। उनले बुझ्न सकेन कि के गरिरहेको थियो, तर त्यसपछि त्यो तालाब फेला पर्यो र हेर्नु भएको थियो कि उनी धेरै घृणित भएका थिए (यहाँ तपाईंले दुबै उपाधिको बारेमा केही मिथक देख्न सक्नुहुन्छ)। उहाँले एहसास गर्नुभयो कि पापहरूका लागि उसको सजायमा आएको थियो। आफ्नो व्यवहार को आशिष, उनले लम्बरजैक र उनको परिवार को अलविदा भन्यो र एक beggar आमा को खोज मा गए, जसको साथ उनले उसलाई बेवकूफ व्यवहार गरे। यो सारांश हो। "द स्टार स्टार" एक परी कथा हो जसको मुख्य नैतिक द्वन्द्व एक व्यक्ति को दिल मा राम्रो र खराब को संघर्ष हो।
बढ्दो तनाव र उन्मूलन
यसबाहेक, यो कदम धेरै चाँडै विकास हुन्छ, र कथा एक सास पढ्न सकिन्छ। कुनै कुरा छैन कि केटा कतिपय घाइते भए, तिनले आफ्नी आमालाई सकेनन। वैसे पनि, सडकले भयानक जवान मानिसलाई शहरको ढोकामा ल्यायो, र उनले गार्डरलाई देखे भने तिनले गार्डले सोधे। त्यो उनको आमा हो। उनले तिनीहरूलाई बताए कि उनको लागि जीवन र मृत्युको कुरा थियो। गार्डेहरूले मात्र "राक्षस" मा हँसिन्छन् र अन्ततः तिनलाई गुजराती जादूगरमा दासत्वमा बेचे। जादूगरले यसको महलमा ताला लगाउँछ र यसलाई मात्र अनुमति दिन्छ कि पहिले "तारा केटा" उनको लागि तीन वटा सिक्कामा प्राप्त गर्दछ - सेतो, रातो देखि पहेंलो सुनको पहेंलो।
केटा जंगलमा गए। अचानक त्यहाँ एक ब्वाँसो बचाइयो, र व्यर्थमा। किनभने यो ब्वाँसो थियो जसले उनलाई पुरानो जादूगरको लागि सिक्का पाउन मद्दत गर्यो, तर तिनीहरू ख्यातिमा कहिल्यै भेटिएन। हरेक समय केटा केटा जंगलबाट फर्किए, तिनले सडक मागेर भेटे र सिक्का दिन आग्रह गरे। अनि प्रत्येक पटक एक जना केटाको पछाडि पूर्णतया रूपान्तरण भयो, एक ट्राम अनुरोध को लागी। जब केटाले beggar लाई अन्तिम सिक्का दिए र पहिले देखि नै जादूगरको हातबाट मृत्युको पर्खाइरहेको थियो, संसार अचानक परिवर्तन भयो: गार्डेले घुट्न थाले र भिगारीको छेउमा एउटै भालाबाबा-आमाको आमा उभिए। जवान मानिसले आफ्नो आँसु, आँसु, उनको चोट र अल्सरसँग धोए। उनले भने: "माथि जानुहोस्। तपाईंले एक मागेर सहयोग गर्नुभयो, तपाईंले आफ्नो बुबालाई सहयोग गर्नुभयो। " भन्न चाहँदैनन्, तिनको सुन्दरता र बल केटालाई फर्केर आउनुभयो। उहाँ त्यो राज्यको राजकुमार थिए, मुख्य शहरमा जुन केही समय अघि भर्ना हुन सकेन। यो कथाको यसको अन्त्य हो, यसको छोटो सामग्री। "केटाकेटी-तारा" त्यहाँ समाप्त हुँदैन।
ओस्कर वाइल्डबाट अन्तिम "बाल्यकाल"
"द पोर्ट्रेट अफ डोरायन्ट ग्रे" को लेखक आफैमा थिएन, यदि उनले एक सकारात्मक टिप्पणीमा कथा पुरा गरे। उनले केहि कुरा भने। निस्सन्देह, वाइल्डको मजाकको सुन्दरता महसुस गर्न, तपाईंलाई सम्पूर्ण कथा पढ्न आवश्यक छ, र "द बाइट-स्टार" कथाको छोटो सामग्रीलाई हेर्न आवश्यक छैन। तर ऋण अझै पनि यस लेख को पाठक बताउँछ कि हे। वाइल्डले यस संरचनालाई लगभग यो समाप्त गर्यो: हाम्रो प्रिय राजकुमार, यद्यपि त्यो निष्पक्ष, दयालु र दयालु थियो, धेरै लामो शासन गरेन। उनको गरीब हृदयले पीडाको अनुभव खडा गर्न सकेन, र तीन वर्ष पछि उहाँ मर्नुभयो, र सिंहासनको उत्तराधिकारी त्रासदी थिए, त्यसैले उहाँका प्रजाहरू अत्यन्तै भाग्यशाली थिएनन्। कथाको यो अन्तले वाइल्डको हस्ताक्षरलाई बदल्छ। मास्टर को अनलिंक पहिचान योग्य स्टाइलिस्ट।
"स्टार ब्युय" विपरीत "डोरियन ग्रे" हो
त्यसोभए ओ। वाइल्डले के भन्नु भयो? "केटा-तारा", तपाईले पढ्नु भएको संक्षिप्त सामग्री, परी कथा असामान्य छ। तर, प्रलोभन स्वीकार गरिसकेपछि, यो लायक छ: शून्य नम्रता पनि बुझ्न पर्याप्त छ: "स्टार ब्युय" एक व्यक्तिको नैतिक पुनरुत्थान बारेमा एक काम हो, एक आध्यात्मिक क्रांतिको बारेमा, दुष्टमाथि राम्रो शर्त को शर्त को बारे मा। "डोरोन ग्रेको चित्र" विपरीत, मानिसको नैतिक र आध्यात्मिक क्षणको बारेमा। र अस्वीकार मा, या बल्कि, अंतिम "केशिन" मा यो स्पष्ट छ कि Wilde, एक कलाकार को रूप मा खुश छोर देखि घृणा गर्दछ। उहाँ मानिसमा दुष्टको भ्रामक भ्रामक हुनुहुन्छ। ओ। वाइल्डको सौंदर्य अवस्था "पोर्त्रेट ..." बाट एक उद्धरण द्वारा व्यक्त गर्न सकिन्छ: "जब त्रासदीले सुन्दरता संग जोड्दछ, सुन्दर छ।" अनि सुन्दरताको क्रमशः मृत्यु भन्दा अधिक कष्ट र अधिक सुन्दर हुन सक्छ?
ओस्टापका लक्षणहरू (एन गोगोल, "टारा बुबा")। Ostap र Andria को तुलनात्मक विशेषताहरु
नाबोकोभको सर्वश्रेष्ठ कार्य
बच्चाहरु को बारे मा निर्देशक प्रवर्तकहरु
निजी खेती - विशेष गरी अहिले गरिरहेको
खरिदबाट यूक्रेनमा व्यवसायको विचार। यूक्रेन मा खरोंच देखि व्यवसाय: सम्भावित विचारहरु
सपना पुस्तक, आनन्द को स्ट्रबेरी सपना कसरी व्याख्या गर्न
खमिर खट्टे दूध: जादू को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री लागि छडी। को "पाँच-प्लस" मा पाक
पहेंलो नङ डिजाइन: विकल्प, फोटो
Windows.old फोल्डर रूपमा सिस्टम ड्राइव देखि हटाउन
साहित्यिक सिद्धान्त र यसको नींव
Hyperthyroidism एक लक्षण - खोज्न के